Ahịrị ọzọ maka PA 6.6 polymer base bidoro na Shanghai
site ha na 20-12-25
Nnukwu nylon US nke Invista (Wichita, Kansas; www.invista.com) kwuru na ọ gbasaa ikike ya maka polyamide 6.6 base polymer na Shanghai Chemical Industry Park (SCIP) site na 40,000 t / y. Ahịrị ọzọ agbakwunyere ọrụ ma na-eweta ikike zuru ezu na saịtị ahụ na 190,000 t / y, 30,000 nke wh ...
interpack na mmiri 2021 kagbuo
Na nkwekọrịta ya na ndị mmekọ ya na mkpakọrịta na ụlọ ọrụ ahụ, yana kọmitii ndụmọdụ gbasara azụmaahịa, Messe Düsseldorf kpebiri ịkagbu ma interpack na components 2021, nke a ga - eme site na 25 February ruo 3 March, n'ihi mgbochi ndị metụtara COVID -19 oria ojoo. “O ...
Evonik enwetala osisi pere mpe na ụlọ ọrụ China Union Union site na ya Venture Capital unit. Companylọ ọrụ ụlọ ọrụ Shanghai na-arụsi ọrụ ike n'ọhịa nke mbipụta stereolithography 3D. Ihe mgbakwunye teknụzụ a na-agbakwunye na-eme ka o kwe omume, iji mepụta akụkụ polymer nke ziri ezi nke ọma. ...